ကိုယ်ခံအားအကြောင်း သိထားဖို့လိုမယ့် အချက်လေးတွေ
အခုလို ရောဂါဘယ တွေ ပေါများလာတဲ့အချိန်၊ ကူးစက်ရောဂါတွေ များလာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ခံ အား (immunity) ကောင်းမွန်ဖို့ က အရေး ကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကနေ ပါဝင်လာပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ အောက်တိုဘာ 7, 2020
သွားတိုက် သွားတိုက်ဆေး သွားနဲ့ခံတွင်း ဖလိုရိုက် သွားပိုးစား ပါဝင်ပစ္စည်း သွားကျဉ် သွားအလွှာ ကော်ဖီ သွားကျောက်တည် သွားကျောက် သွားဖုံးရောင်
သွားနှင့် ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး မတ် 25, 2020
သွားတွေ အစားအစာတွေ သွားကိုက် သွားဖုံးရောင် လျှာ Fluoride သွားတိုက်ဆေး သွားတိုက်တံသွားဖုံးရောဂါ သွားပွတ်ကြိုး အသက်ကြီးသူ သွားကြားထိုးတံ ခံတွင်းနံ့
သွားနှင့် ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး မတ် 18, 2020
ကာကွယ်ဆေးထိုး ပြီး ကလေး အငိုမတိတ်တော့ဘူးလား။ ဒါလေးတွေ လုပ်ပေးကြည့်ပါ။
ကာကွယ်ဆေးထိုး တယ်ဆိုတာ ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုပါ။ ဆေးထိုးပြီးလို့ ကလေးအငိုမတိတ်ရင် ဒါတွေ လုပ်ကြည့်ပါ။
မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း မတ် 21, 2019 .2mins read
အကြောဆေး သွင်းကြဦးမလား ရပ်ကွက်ထဲက၊ရွာထဲက၊လမ်းထဲက ဆေးခန်းတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ ...
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ မေ 14, 2018 .3mins read
မလိုအပ်ဘဲ ဆေးထိုးတာကောင်းလား အားဆေးအဖြစ်သွင်းတဲ့ အကြောဆေးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ...
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ မတ် 22, 2018 .2mins read
Haemorrhoid Treatment By Injection Or Banding (လိပ်ခေါင်းကို ဆေးထိုးပြီး ဒါမှမဟုတ် သားရေကွင်းချည်ပြီး ကုမယ်)
ခွဲစိတ်တာအပြင် လိပ်ခေါင်းကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသနိုင်သလဲ။ ဆေးထိုးပြီး ...
အခြေခံကျန်းမာရေး, ဆေးပညာကုထုံးနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုများ စက်တင်ဘာ 12, 2017 .2mins read
ဆေးထိုးရင်နာမှာကြောက်သူတွေ အတွက် နည်းလမ်းလေးတွေ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 31, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 14, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 30, 2019 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇွန် 24, 2019 .2mins read